Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို. 8888
အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို. 8888
at 10/28/2014 03:13:00 AM
Myen shada pyi hpyen asuya hpe ning hkap taw sai. An hte Myu sha ni mung ladat jaw jaw hte Anut na jin jin rai ra sai.
Post by Saihark Hark.
RFA Burmese အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီး ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေ စုပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ဒီနေ့ညနေက တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီတောင်းဆိုပွဲမှာ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကိုကြီး ပြောကြားခဲ့တာကို ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး - ကျော်ထွန်းနိုင်၊ ကျော်ဇောဝင်း